Medical Writings ဆေးပညာစာများ: Inhalant abuse လမ်းဘေး ဆေးရှူ
ကျနော် ရေးနေတဲ့ “ကော်ဗူးရှူတဲ့ လမ်းပေါ်က ကလေးငယ်တွေ” သတင်းဆောင်းပါးနဲ့ ပါတ်သက်ပြီး ဖြေပေးပါ။
၁။ ရန်ကုန်မြိုမှာ အိမ်မရှိ လမ်းပေါ်မှာနေတဲ့ ကလေးတွေ လမ်းဘေးနေပြိး (ကော်ဗူး) ဆိုတဲ့ မူယစ်ဆေးတမျိုး သုံးစွဲ နေကြတယ်။ သုံစွဲတော့ ကျန်းမာရေးနဲ့ ပါသက်ပြီး သူတိုဘာတွေ ဖြစ်လာနိုင်သလဲ။
၂။ ဒီကလေးတွေရဲ့ ဘဝအတွက် လမ်းမှန် ပြန်ရောက်လာအောင် ဘယ်သူမှာ တာဝန်ရှိပြီး ဆောင်ရွက်ပေးသင့်ပါသလဲ။
၃။ ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတာမျိုးက India နိင်ငံမှာလည်း အများကြီး ရှိပါတယ်။ India အစိုးရနဲ့ မြန်မာအစိုးရ လုပ်ဆောင်ပေးမှုမှာ ဘာတွေ ကွာခြားပြီး တာဝန်ယူမူ ရှိ-မရှိ ဆရာအမြင်။
Inhalant abuse တလွဲသုံးလို့ ဆေးစွဲစေတဲ့ ရှူစရာတွေက အမျိုးအစား အများကြီးရှိတယ်။ Tobacco (ဆေး) ဆေးလိပ်၊ Marijuana ဆေးခြောက် နဲ့ Crack (ကိုကိန်း) တွေလို မီးရှို့ပြီးရှူတာမျိုး မဟုတ်ဘူး။ ဆေးကုရာမှာသုံးတဲ့ Nitrous oxide မေ့ဆေးလိုက တမျိုး ဖြစ်တယ်။ အခုပြောတဲ့ အမျိုးအစားတွေကနေ Intoxicating အဆပ်သင့်ခြင်း ဖြစ်တာကို Huffing လို့ ခေါ်တယ်။ အကြမ်းခွဲပြောရရင် ဆေးသုံးနဲ့ ဆေးသုံးမဟုတ်တဲ့ လူသုံး ပစ္စည်းကို တမင်တကာ ရှူကြတာတွေ ဖြစ်တယ်။
၁။ Aliphatic hydrocarbons ဆိုတဲ့ Petroleum products ဓါတ်ဆီ-ရေနံဆီလို ပစ္စည်းတွေမှာ Propane, Butane ဓါတ်တွေ ပါတယ်။
၂။ Aromatic hydrocarbons တွေထဲမှာ Toluene နဲ့ Xylene ဓါတ်တွေ ပါတယ်။
၃။ Ketones acetone ဆိုတာ လက်သည်းနီ-ဖျက်ဆေးတွေမှာ ပါတယ်။
၄။ Haloalkanes ဆိုတာထဲမှာ Hydrofluorocarbons, Chlorofluorocarbon နဲ့ Trichloroethylene ဓါတ်တွေ ပါတယ်။
၅။ Nitrites ဆိုတာက Alkyl nitrites, Nitrous oxide ဓါတ်တွေ ဖြစ်တယ်။
• Gasoline နဲ့ Paint thinner သုတ်ဆေးတွေ ကြတော့ ဒီအတိုင်းရှူတယ်။
• တချို့က အငွေ့ကို ရှူဘို့ Plastic bags ပလပ်စတစ်အိတ်ကို သုံးတယ်။
• Whipped cream aerosol cans ဗူး၊ Aerosol hairspray (စပရေး)၊ Non-stick frying spray ကြော်ချက်တဲ့ အခါ မကပ်စေတဲ့ (စပရေး) တွေကရတဲ့ Nitrous oxide gases ဓါတ်ငွေ့ကို Plastic bags ပလပ်စတစ်အိတ်မှာ ဖြန်းပြီး ရှူကြတယ်။
• Propane နဲ့ Butane gases အငွေ့တွေကို Canister ထည့်တဲ့ဗူးကနေ တိုက်ရိုက်ရှူတယ်။
ဒီလိုဟာတွေကို ရှူလိုက်တာနဲ့ အဆုပ်မှာရှိတဲ့ သွေးကြောမျှဉ်လေးတွေရဲ့ မျက်နှာပြင်တွေကနေ စုပ်ယူပြီး၊ သွေးထဲ ရောက်လာမယ်။ သွေးပြန်ကြောထဲ ဆေးထိုးသလောက်ကို သက်ရောက်တာ မြန်တယ်။
• Alcohol-like intoxication အရက်ဆိပ်သင့်သလို ဖြစ်နိုင်တယ်။
• Intense euphoria အကောင်းတွေချည်း မြင်-ထင်နေတာလဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။
• Vivid hallucinations မဟုတ်တာတွေ မြင်-ကြား နေတာမျိုးလဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။
အမျိုး-အစားနဲ့ အနည်း-အများပေါ်မှာ မူတည်တယ်။ Rubber cement ကော်ဗူးလို Paint thinner (သင်နာ) လိုဟာ နဲနဲသာ ရှူရင် Alcohol inebriation အရက်သောက်ထားသူလို ဖြစ်လာစေမယ်။ များသွားရင် Distortion in perceptions of time and space ဘယ်အချိန်ရှိပြီ၊ ဘယ်နေရာ ရောက်နေတယ် ဆိုတာ မသိတော့ဘူး။ Hallucinations တကယ် မရှိတာတွေ ရှိတယ်-ကြားတယ် ထင်လာ-မြင်လာမယ်။ Emotional disturbances စိတ်လှုတ်ရှားမှုတွေက သူရူးလို ဖြစ်လာတယ်။
1. Methylene chloride အငွေ့ကနေ Carbon monoxide poisoning (ကာဗွန်မိုနော့ဆိုက်) အဆိပ်သင့်နိုင်တယ်။
2. Gasoline ဓါတ်ဆီကနေ Lead poisoning ခဲဆိပ်သင့်နိုင်တယ်။ ဒါ့ကြောင့် ခဲမပါတဲ့ ဓါတ်ဆီကို တီထွင်လာရတာ ဖြစ်တယ်။
3. Carbon tetrachloride ကနေ Liver damage အသဲကို ထိခိုက်နိုင်တယ်။
4. Butane နဲ့ Propane ကနေ မီးလောင်နိုင်တယ်။
5. Benzene ကနေ Bone marrow depression ရိုးတွင်းခြင်ဆီ အားနည်းစေတယ်။
6. Toluene ကနေ Myelin ဆိုတဲ့ အာရုံကြောနေရာကို ထိခိုက်နိုင်တယ်။
7. Butane gas (ဗြူတိန်း) ဓါတ်ငွေ့ရှူရာကနေ Drowsiness မူးဝေမယ်၊ Narcosis ဆဲလ်တွေသေမယ်၊ Asphyxia အသက်ရှူမဝဖြစ်မယ်၊ Cardiac arrhythmia နှလုံးခုန်မမှန်ဖြစ်မယ်၊ Frostbite ရေခဲလောင်တာမျိုး ဖြစ်မယ်။
ခဏဖြစ်တာတွေလဲ ရှိတယ်။ Headache ခေါင်းကိုက်မယ်။ Nausea and vomiting ပျို့ချင်-အန်ချင်ဖြစ်မယ်။ Slurred speech လျှာလေး-အာလေး ဖြစ်လာမယ်။ Loss of motor coordination ကြွက်သား လှုတ်ရှားမှုတွေမှာ အပြန်အလှန် ထိန်းတာမျိုးတွေ မကောင်းဖြစ်လာတယ်။ အောက်စီဂျင်ထက် လေးတဲ့ ဘယ်ဓါတ်ငွေ့မျိုးမဆို ရှူရင် အဆုပ်ထဲမှာ အောက်စီဂျင်ကို နေရာဝင်ယူလို့ Hypoxia လေမဝတာ ဖြစ်မယ်။ Wheezing ရင်ကြပ်လာမယ်။ အငွေ့ရှူသူတွေရဲ့ နှာခေါင်းကို ကြည့်ရင် သိသာတယ်။ Glue sniffer's rash နှာခေါင်းနဲ့ ပါးစပ်မှာ နီရဲရဲ ဖြစ်နေတော့တယ်။
စိတ်ကို တမျိုး ပြောင်းစေတဲ့ စည်းစိမ်ခံချင်လို့ သုံးတဲ့ Recreational drug ဆေးဝါးတိုင်းဟာ အန္တရာယ်ရှိတဲ့ အမူအကျင့်တွေကနေ ဒဏ်ရာတွေ၊ ထိခိုက်မှုတွေ ဖြစ်ကြတယ်။ ဥပမာ ယာဉ်တိုက်မှု ဖြစ်တာ၊ ခိုက်ရန်ဖြစ်တာ။ မီးလောင်တာ။ Computer-cleaning dusters ကွန်ပြူတာ သန့်ပေးတဲ့ အရာတွေကို ရှူမိရင် သိပ်အန္တရာယ်ပေးနိုင်တယ်။
Pneumonia နူမိုးနီးယား၊ Cardiac failure or arrest နှလုံး ရပ်သွားတာ၊ Aspiration of vomit အန်ဖတ် ဆို့တာတွေလဲ ဖြစ်ကြတယ်။ အကြာကြီးရှူနေသူတွေ Brain damage ဦးနှောက်ကို ထိခိုက်လာတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင် အမျိုးသမီးတွေ ရှူရင် ကိုယ်အလေးချိန် နည်းတဲ့ကလေး မွေးလာတတ်တယ်။ အင်္ဂါချို့ယွင်းတဲ့ ကလေး မွေးတယ်ဆိုတာလဲ အထောက်အထား ရှိပါတယ်။
ဆောင်းပါးရေးသူ ထောက်ပြတာ မှန်တယ်။ များသောအားဖြင့် လူငယ်တွေနဲ့ ကလေးတွေက သုံးကြတယ်။ လမ်းပေါ်က ကလေးတွေ များတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ Deodorant sprays ချွေးနံ့ပျောက်ဆေး၊ Hair spray ဆံပင်-ပန်းဆေး၊ Air fresheners အနံ့ကောင်းအောင် ဖြန်းဆေးဆိုတာတွေက ဈေးမကြီးဘဲ အလွယ်ရလို့ ဆင်းရဲသားတွေက သုံးနိုင်ကြတယ်။
၂ဝဝဝ ခုနှစ်အတွင်း ဗြိတိန်မှာ Solvent-related deaths ဖျော်စရာပစ္စည်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သေရတာတွေ အားလုံးထဲမှာ Butane ကြောင့် သေရတာက ၅၂% ရှိခဲ့တယ်။ တချို့မှာ ရုတ်တရက် သေဆုံးရလို့ Sudden sniffing death လို့ နာမယ် တပ်ထားတယ်။ ၁၉၈၈-၉၈ (တက်ကဆပ်စ်) မှာ ၁၄၄ ယောက်သေခဲ့တယ်။ ၁၉၈၇-၁၉၉၆ အတွင်း (ဗာဂျီးနီးယား) မှာ ၃၉ ယောက် ရှိခဲ့တယ်။ အငွေ့ရှူရာကနေ Statistics on deaths သေဆုံးမှု စာရင်းဇယားလုပ်ဘို့ ခက်တယ်။ ရှိပြန်ရင်လဲ တကယ် ဖြစ်နေတာထက် နည်းနေမယ်။ မြန်မာပြည်မှာတော့ Referendum စာရင်းကိုတော့ “အတိအကျ” လုပ်တဲ့အကျင့် ရှိတယ်။ မုန်တိုင်းတိုက်လို့ ကြက်ဥကွဲတာလဲ သိပ်တိကျခဲ့တယ်။ ကျန်းမာရေးက သိပ်အရေးမကြီးတော့ ခပ်ပေါ့ပေါ့ဘဲ။
Glue and gasoline sniffing ကော်ဗူးနဲ့ ဓါတ်ဆီရှူသူတွေ အာရှနဲ့ အာဖရိကမှာ များလှတယ်။ Dendrite brand ဆိုတာ အသုံးအများဆုံး ဖြစ်တယ်။ Contact adhesives ကပ်ရတဲ့ ပလာစတာ၊ Rubber cements ကော်ဗူး၊ Paint thinners သုတ်ဆေး၊ Iodex အကြောနာလို့ လိမ်းရတဲ့ဆေး Erase-X ခေါ်တဲ့ Correction fluid ဖျက်ဆေးထဲမှာ Toluene ပါတယ်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံကလဲ ဆင်းရဲသားများလို့ ဒီပြဿနာတွေက လမ်းဘေးမှာ ရှိတယ်။ ကိုင်တွယ်တာကတော့ လွတ်လပ်မှု အတော်ရှိပြီး၊ ဘက်ဒေါင့်စုံကနေ လုပ်နေနိုင်ကြတယ်။ ကိုယ့်နိုင်ငံနဲ့ ကွာတာ ပြောရရင် မဏ္ဍိုင်မှန်သမျှ တခုမှ မတူကြဘူး။
Posted by Dr. Tint Swe at 8:49 PM